मृगौला डरलाग्दो रोग हो, जीवनशैली राम्रो भएपनि, वर्षको एकपटक चेक गर्नुस है भनेका छौं - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › अन्तरवार्ता ›
मृगौला डरलाग्दो रोग हो, जीवनशैली राम्रो भएपनि, वर्षको एकपटक चेक गर्नुस है भनेका छौं
२७ पुष २०७७ | २०:०१:४५ मा प्रकाशित
डा.ऋषिकुमार काफ्ले हाल राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र र सुमेरु अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत साथै मृगौला बचाउ अभियानको अध्यक्ष समेत रहेका छन् । मृगौला विशेषज्ञको रुपमा ३८ वर्षदेखि अनवरत रुपमा सेवारत डा. काफ्लेले वीर अस्पतालमा ३२ वर्ष पहिले डायलाइसीस सेवा सुरु गराउने र २५ वर्ष अघि राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । साथै उनी निःशुल्क डायलाइसीस सेवाको नीति बनाउन लागि पर्ने अभियन्तासमेत हुन् ।
रोग लागेपश्चात उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उचित हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरी राष्ट्रिय मृगौला बचाउ अभियानको शुरुवात र नेतृत्व उनले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने यो लामो यात्रामा डा. काफ्लेले हालसम्म वीर, कान्ति, पोखरा र लाहानमा काम गर्नुको साथै मेडिकेयर र किस्ट अस्पतालमा समेत कार्यरत रही व्यवसायिक अनुभव, दक्षता र विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । डा. काफ्लेसँग नेपालबहसका लागि सन्तोष खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
१. मृर्गौला बिग्रिएपछि मात्रै मान्छेले तिरिमिरी देख्छ वा मृर्गाैला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भ्रमहरु के के हुन् ?
मृर्गाैलाका भ्रमहरु भनेको मैले केही गरेको छैन, मलाई रोग लाग्नु भएन । मलाई केही लक्षण हुनुपर्ने, केही नै नभैकन रोग कसरी लाग्न सक्छ ? भन्नु नै एउटा मुख्यकारण हो । लक्षण खोज्दै हिँड्दा मृगौला बिग्रिसकेको हुन्छ । यसको ठुलो भ्रम भनेकै यही लक्षण नहुनु र्नै हो ।
चुरोट, खैनी, जाँडरक्सी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्व हो । यसले मृर्गौलामा धेरै असर पुर्याउँछ । त्यस्तै तौल बढि, उच्च रक्तचाप, मधुमेह छ कि छैन्, यी रोगहरुले मृर्गौला बिग्रान सक्छन् । यी रोग छन् भने ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो यदि छैन भने पानी धेरै पिउन पर्यो । समयमा सुत्ने र उठ्ने गर्नुपर्यो । सकारात्मक सोच्च राख्न पनि उतिकै आवश्यक छ । सोच गलत गर्नाले पनि रोगहरु निम्त्याउने गर्छ ।
२. मेरो मृर्गौला स्वस्थ छ वा कस्तो भनेर कसरी थाहा पाउने ?
सबैभन्दा पहिला पिसाब जाँच हो । पिसाबमा प्रोटिन जान्छ । प्रोटिन गएको छ भने मृर्गौलामा रोग छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । पिसाब फेर्दा फिजको गाँज नै आयो भने रोग लाग्यो भनेर सर्तक रहनुपर्छ । रगतमा क्रीयाटीनीन जाँच्ने । क्रीयाटीनीन हुनु भन्दा बढी छ भने मृगौला बिग्रिन थाल्यो भनेर थाहा पाउनु पर्छ । बिग्रिनु र रोग लाग्यो भनेर थाहा पाउनु फरक कुरा होइन ।
तर कहिलेकाहीँ रोग लागेर मृर्गाैला धेरै बिग्रिसकेको हुन्छ र तेस्रो परीक्षण भनेको अल्ट्रासाउण्ड वा सामान्य भाषामा भिडियो एक्सरे हो । मृर्गौला खुम्चिएर सुक्दै सानो भाको छ कि छैन भनेर जानकार हुनुपर्छ । यदि हामीले रगत, पिसाबमा खराबी देख्यौँ र दुबै मृगौला सानो देखियो भने यो कुनै दीर्घरोगले गर्दा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसबाहेक एक्सरेमा पत्थरी, पिसाब थुनिएको र पानीको फोका भएको मृर्गौलामा देखाउँछ ।
३. मृर्गौला स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिनुपर्ने खानपान र जीवनशैलीहरु के कस्ता हुन् ?
पहिलो कुरा हाम्रो शरीरबाट फोहोर फालिन्छ । मृर्गौला कमजोर होस् वा बलियो, त्यसले हाम्रो जीवनयापनमा प्रयोग गरिएका जे कुरा पनि पिसाबमार्फत फाल्छौं । पिसाबमा फोहोर बढी फाल्नु भनेको अत्याधिक प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानु भएको छ भन्ने हुन्छ, जुन फोहोर बन्छ र मृर्गौलाले पिसाबको माध्यमबाट फाल्छ । वर्षौसम्म त्यही खाना खाँदा मृर्गौलालाई जोखिम हुन्छ ।
पहिलो कुरा के खाँदै छु ? त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । वनस्पतिजन्य खानेकुरा सबैभन्दा स्वस्थ मानिन्छ । पानी प्रशस्त मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ । पानी मात्र पिउछु भनेर पनि हुँदैन, मैले २ लिटर पिसाब फेर्छु कि फेर्दिन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ ।
त्यसैगरी व्यायाम र दैनिक १० हजार पाइला हिँड्नु पर्छ । चुरोट, खैनी, जाँडरक्सी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्व हो । यसले मृर्गौलामा धेरै असर पुर्याउँछ । त्यस्तै तौल बढि, उच्च रक्तचाप, मधुमेह छ कि छैन्, यी रोगहरुले मृर्गौला बिग्रान सक्छन् । यी रोग छन् भने ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो यदि छैन भने पानी धेरै पिउन पर्यो ।
समयमा सुत्ने र उठ्ने गर्नुपर्यो । सकारात्मक सोच्च राख्न पनि उतिकै आवश्यक छ । सोच गलत गर्नाले पनि रोगहरु निम्त्याउने गर्छ । प्रत्येक पटक जाँच गराउन जाँदा मेरो मृर्गौला बिग्रियो भन्ने सोच भयो भने नकारात्मक असर पर्छ । त्यसकारण सही सोच राख्न पनि आवश्यक छ ।
४.हाम्रो शरीरमा मृर्गौलाको भूमिका के हो ?
यसले हामीले खाएका खानेकुराहरुको फोहोर बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । सात्विक वा तामसी जे खाना खाएपनि फोहोर त निस्किन्छ नै । त्यो निकाल्ने काम मृर्गौलाले गर्छ । हामीले खाने झोलिलो पर्दाथ पनि पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । हामीले बढी खाने नुन पनि निकाल्ने काम गर्छ । १२–१३ दिनसम्म नुन नखाँदा पनि हामी ढल्दैनौं किन की त्यो मृर्गौलाले थाहा पाउँछ र पिसाबबाट नुन फाल्दैन ।
जतिबेला यस्तो अवस्था आउँछ, त्यो मान्छेले खाना खान सक्दैन, सुत्न सक्दैन, वान्ता गर्छ, शरीर चिलाएर बस्न सक्दैन, पिसाबको मात्रा घट्छ र शरीर सुनिन्छ । शरीरमा फोहोरको मात्रा बढेर खान र सुत्न नसक्ने अवस्थामा त्यो मान्छेलाई बचाउन डायलिसिस गरेर रगतबाट फोहोरको मात्र झिकेर फाल्नु पर्छ ।
हड्डी बलियो बनाउन भिटामीन डी लाई सक्रिय बनाउँछ । हामी सबैको भिटामीन डी छालाभित्र निस्क्रिय हुन्छ । त्यसलाई घामले सक्रिय बनाउँछ । तर भिटामीन डी लाई अन्तिम समयसम्म सक्रिय बनाउने काम मृर्गौलाले गर्छ । यदि मृर्गौला बिग्रियो भने भिटामीन डी सक्रिय हुन पाउँदैन । सक्रिय भएन भने क्याल्सीयम एब्जर्ब हुँदैन । जसले शरीरको हड्डी बलियो हुन सक्दैन । आइरनलाई संचालन गर्ने काम एरीथोपोइटीन हो यो बनाउने काम पनि मृर्गौलाले नै गर्ने गर्छ । देख्दा सानो मुठ्ठीभरको सिमी आकारको मृर्गौला, तर काम भने धेरै गर्छ ।
स्वस्थ मानिसलाई मृर्गौलको महत्व भएन, जसको मृर्गौला बिग्रिएको हुन्छ त्यसले तिरीमिरी देख्छ । मृर्गौलाको महत्व धेरै नै छ, समयमा बुझ्नु पर्छ ।
५. कुन अवस्थामा मृर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ र कुन अवस्थामा औषधीले मात्र काम गर्छ ?
४०–४५ वर्षको स्वस्थ व्यक्ति जसलाई कुनैपनि किसिमको उच्च रक्तचाप वा मधुमेह केही पनि छैन । उसको स्वस्थ्य जीवनशैली छ, तर जाँच गर्न गयो भने पिसाबमा प्रोटिन अलिकति देखियो, रगतमा क्रिएटिनिन बढेको देखियो र दुबै मृर्गौला सानो देखियो, जसलाई हामी मृर्गौलामा दीर्घरोग भयो भनिन्छ । यसलाई निको पार्न सकिन्न । जसको मृर्गौला ५० प्रतिशत अझै काम गर्छ भन्ने भयो भने उसको उपचार गरिन्छ ।
२० वर्षपछि यसको १० प्रतिशत मात्र मृर्गौलाले काम गर्छ वा १० प्रतिशत भन्दा कम समय काम गर्छ । जतिबेला यस्तो अवस्था आउँछ, त्यो मान्छेले खाना खान सक्दैन, सुत्न सक्दैन, वान्ता गर्छ, शरीर चिलाएर बस्न सक्दैन, पिसाबको मात्रा घट्छ र शरीर सुनिन्छ । शरीरमा फोहोरको मात्रा बढेर खान र सुत्न नसक्ने अवस्थामा त्यो मान्छेलाई बचाउन डायलिसिस गरेर रगतबाट फोहोरको मात्र झिकेर फाल्नु पर्छ ।
शरीरबाट रगत झिकेर मेसिनबाट सफा गरेर फर्काउने प्रकियालाई हेमोडायलिसिस भनिन्छ भने अर्को नाइटो तल एउटा पाइप राखेर सधै बिहान, दिउँसो र साँझ एकपटक (विदेशबाट आएको एक विशेष फुल्लू पेरीटोनीयल डायलाइसीस भन्ने छ) त्यो २ लिटरको व्याग पेटमा राख्ने र ५–६ घण्टामा त्यो पानी झिक्ने र नयाँ पानी हाल्ने एक दिनमा ६ लिटर पानी हाल्नै पर्नै हुन्छ । यो ३६५ दिनसम्म नै हाल्नु पर्ने हुन्छ । हेमोडायलिसिस चाहि हप्ताको दुई दिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो त बाँच्ने तरीका मात्र हो । यदि राम्रो तरीकाले बाँच्ने हो भने मृर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । मृर्गौला प्रत्यारोपणमा उमेरको हद छ । यसमा जसलाई पनि प्रत्यारोपण गर्न सक्दैनौं । मृर्गौला लिने बिरामी व्यक्ति ६० वर्ष भन्दा माथी हुनुहुँदैन । धेरै बढी उमेरमा अप्रेशन गरिएमा हामीले सफलता प्राप्त गर्दैनौं ।
मृर्गौला राख्ने व्यक्तिको मुटु कस्तो छ ? उसको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ ? अप्रेशन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो हेर्नुपर्नै हुन्छ । सबैभन्दा महतवपूर्ण मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने मान्छे नातेदार हुनुपर्छ । जोखिम मोलेर मृर्गौला दिने व्यक्ति परिवारमा यदि छ भने त्यो व्यक्तिको स्वस्थ्य र रगतको समुह मिल्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्यारोपण पश्चात पनि विदेशबाट आउने औषधि खानै पर्छ ।
यो झाराटार्ने औषधि मात्र नलिएर साँच्चिकै निशुल्क औषधी उपचार बीमा लागू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि धेरै सजिलो उपाय छ । कमाउने नेपालीहरुले आम्दानी मध्ये १ प्रतिशत स्वास्थ्य कोषमा लगानी गर्नुपर्छ । संचयकोषमा जम्मा हुनेमा अब स्वास्थ्य कोषमा लगानी गर्नु पर्यो । स्वास्थ्यमा हरेक व्यक्तिले एक प्रतिशत हाल्ने हो भने अर्बौ पैसा जम्मा हुन्छ । त्यो पैसाले निःशुल्क सेवा दिऔं र बढि पैसा कमाउने व्यक्ति निजी क्षेत्रमा गएर काम गरौं ।
५. नेपालमा मृर्गौला स्वास्थ्यको चेतनास्तर कस्तो छ ?
३२ वर्ष अगाडी वीर अस्पतालबाट डायलाइसीस सेवा सुचारु गरिएको हो । त्यो अवस्थामा भनिन्थ्यो, नेपालमा पनि डायलाइसीस चाहिन्छ र ? तर यसको महत्व स्वरसम्राट नारायणगोपाल गुरुवार्चायलाई डायलाइसीस दिँदा केही जोखिम भएपछि अस्पताल भर्ना हुनु भयो र सबैलाई डायलिसिस भन्ने बारेमा थाहा भयो ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीको मृर्गौला प्रत्यारोपण देश भित्रै भयो । उहाँको पहिलो प्रत्यारोपण देश बाहिर हुँदा कसैलाई थाहा नै भएन तर यो पटक प्रत्यारोपण नेपालमै भयो । मृर्गौला प्रत्यारोपण भनेको गाह्रौ रैछ भन्ने सोच आयो । अर्कोतर्फ जनआन्दोलन हुँदै गएपछि मान्छेले किन सेवा नपाउने ? क्यान्सर, मुटु उपचारको आवाज उठेपछि ६५ सालपछि जेष्ठ नागरिकको डायलाइसीस निःशुल्क भयो ।
६६ सालपछि हेपाटाइटिस र एचआईभीको डायलाइसीस निःशुल्क भयो । ६९ र ७० बाट भने नेपाली नागरिकले डायलाइसीस निःशुल्क पाउन सुरु गरे । धेरै जिल्लाहरुमा डायलासिस सेवा नै छैन् । आमरुपमा हेर्दा धेरै नागरिकलाई मृर्गौलाको चेतना छैन् ।
गरिब मुलुकले डायलाइसीस निःशुल्क दिएका कारण एशियामा १ नम्बरमा परेको छ । योसँगै अर्को प्रश्न उठ्छ, के नेपालले यो धान्न सक्छ ? धान्नु परेको छ तर पछिको लागि के हुन्छ ? र कहिलेसम्म ? यदि हामीले चेतना जगाउने कार्यक्रम गरेनौं भने धान्न सक्दैनौं ।
७. निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा मृर्गौलाको उपचार र पहुँचको अवस्था कस्तो छ ?
यी दुबै क्षेत्र एकअर्काका पुरक हुन् । सरकारी अस्पतालले दिएको सेवाले कहिल्यै पनि पुगेको छैन । प्रस्टरुपमा भारतमा प्रत्यारोपणको आन्दोलन छेडियो भने त्यो निजी अस्पतालबाट छेडिएको हो । भारतमा निजी अस्पतालले प्रत्यारोपणमा दक्षता हासिल गरे ।
नेपालमा पनि सरकारी अस्पतालमा बसेका डाक्टरहरुलाई सरकारी तलबले धान्दैन्, निजीमा आउनै पर्छ । त्यसकारण यी दुबै एकअर्काका परिपुरक हुन । सक्नेले निजी र नसक्नेले सरकारीमा औषधि उपचार गरिरहेका छन् र कयौं पटक नसक्नेले पनि निजी क्षेत्रमा जान बाध्य छन् । त्यो कुराको भने अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले अति गरिब व्यक्ति छन् भने तिनीहरुलाई पूर्णरुपमा निशुल्क उपचार भनेको छ ।
जो घोषणा मात्र भएको छ, पुरा भएको छैन् । प्रत्यारोपण गर्नुपर्यो भने नेपालमा काठमाडौं नै आउनु पर्ने ? हाम्रो सातवटा प्रदेशमा रहेका अस्पतालले २ वर्षभित्र प्रत्यारोपण गर्न सक्ने अस्पताल बनाउछु भन्ने सोच किन नबनाउने ? त्रिविले एउटा प्रदेश लिओस, वीरले एउटा, भक्तपुर अंग प्रत्यारोपण अस्पतालले एउटा प्रदेश लिओस त्यसभन्दा अन्य निजी क्षेत्रका एउटा अस्पतालले एउटा प्रदेश लिए भइहाल्छ ।
प्रदेशमा गएर ४–५ जनालाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रत्यारोपण गरेपछि यहाँ पनि गर्न सकिने रहेछ भनेर प्रदेश अस्पतालले सोच बनाउछ । सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि केही सोच्च नै नबनाएको देखिन्छ । सरकारी क्षेत्र सीमित दायरामा बसेको देखिन्छ ।
सकिन्छ भने यो झाराटार्ने औषधि मात्र नलिएर साँच्चिकै निशुल्क औषधी उपचार बीमा लागू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि धेरै सजिलो उपाय छ । कमाउने नेपालीहरुले आम्दानी मध्ये १ प्रतिशत स्वास्थ्य कोषमा लगानी गर्नुपर्छ । संचयकोषमा जम्मा हुनेमा अब स्वास्थ्य कोषमा लगानी गर्नु पर्यो । स्वास्थ्यमा हरेक व्यक्तिले एक प्रतिशत हाल्ने हो भने अर्बौ पैसा जम्मा हुन्छ । त्यो पैसाले निःशुल्क सेवा दिऔं र बढि पैसा कमाउने व्यक्ति निजी क्षेत्रमा गएर काम गरौं । यसो भयो भने हामी एक स्टेप अगाडी जान्छौं ।
नेपालगंज मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजहरुले पनि धेरै बिरामीलाई सेवा दिएका छन् । आज निजी अस्पताल नभएका भए, यदि त्यहाँबाट ती अस्पताल हटाइदियो भने सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन । निजी क्षेत्रले त्यसरी दिएको सेवालाई सरकारले धन्यवाद पनि भन्न सक्नुपर्छ ।
८. नेपालको सन्दर्भमा मृर्गौला उपचारका लागि जनशक्तिको स्थिति के छ ?
३५ बर्ष अगाडी वीर अस्पतालमा डायलाइसीस सुरु गर्नुपर्यो भन्दा हामी तीन जना चिकित्सक थियौं । जनशक्तिलाई अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा वीर अस्पतालको डाक्टर नर्स र टेक्नीसियनलाई तालिम दिइएको थियो । त्यसपछि एम्सले तालिम दिएको छैन् होला । हामी तीन जना नेफ्रोलोजीष्ट थियौं डा. पुस्कर सत्याल, डा. सुधा शर्मा र म । त्यसबेला ३ जना मात्र विशेषज्ञ थियौं भने अहिले ६० जना भन्दा बढी विशेषज्ञ छन् ।
काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा विशेषज्ञ कम छन् । तर निजी अस्पतालहरुले तानेका छन् । वीपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान ठुलो संस्था हो । त्यहाँ मृर्गौला विशेषज्ञ हुनु भनेको राम्रो कुरा हो । तर मृर्गौला रोग विशेषज्ञ कार्डियोलोजीस्ट बनिसक्नु भयो । अब त्यहाँ मृर्गौला रोग विशेषज्ञ नै छैन् । पूर्वमा हेर्ने हो भने निजी अस्पतालले २ जना राखेको छ । चितवन र बुटवलमा पनि निजी अस्पतालले २/२ जना राखेको छ ।
यी निजी अस्पतालहरुले चिकित्सकले खोजेको तलब दिएको छ । चिकित्सकले काम पाउनु पर्छ अनि माम पनि । घरपरिवार सबैलाई पुग्ने दिनु पर्छ । तर नर्सिङ स्टाफको भने समस्या छ । राष्ट्रिय मृर्गौला उपचार केन्द्रमा २० वर्ष पहिला हामी आफैले तालिम दिएका थियौं । अहिलेका नाम चलेका अस्पतालहरुले अन्य नर्सहरुको तुलनामा उनीहरुलाई २५ सय बढि तलब दिइरहेका छन् । दक्ष तालिम दियो भने म्यानपावरको खाँचो छैन् । नर्सहरु क्यानडा र अष्ट्रेलिय पुगेका छन् तर पनि हामी खुशी छौं ।
९. मेडिकल शिक्षा मंहगो भयो भनेर बारम्बार गुनासो र विरोध भएको सुनिन्छ, यसको समाधान के होला ?
मेडिकल शिक्षाको माग त्यही भएर महंगो भयो । नेपाली जनताले चिकित्सकलाई धेरै माया गर्छन । चिकित्सक भयो र सेवा दियो भने सबैले माया गर्ने र पेट पाल्न सक्छ भन्ने लोभ सबैमा भयो । त्यसका लागि पनि यो क्षेत्रमा धेरै मोह बढिरहेको छ ।
अर्को कुरा चिकित्सक भएर विदेश गयो भने अझै बढि राम्रो हुन्छ भन्ने पनि भयो । क्रेज बढ्दै गयो । जसका लागि धेरे मेडिकल कलेजहरु खोलिए । सक्ने निजीमा गए र नसक्ने सरकारीमा गए । ५० वर्ष अगाडी जम्मा २०/२५ जनालाई छात्रबृतिमा पढ्न पठाइन्थ्यो् भने अहिले १८ वटा मेडिकल कलेज नेपाल मै छन् ।
नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष निःशुल्क २ सय विद्याथीलाई छात्रबृतिमा पढ्न दिन्छ । तर सरकारले पढाएका २ सयलाई राम्रोसँग राखेको छ त ? कहीँ १० जना चिकित्सकलाई एकै ठाउँमा राखेको छ । कहीँ एकजना पनि छैन । सरकारी कोटाबाट उत्पादित डाक्टरको व्यवस्थापन र परिचालनको पाटोमा केही कमजोरी पक्कै भएको छ ।
यसरी दुईसय विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पढ्न दिँदा पनि मंहगो भन्ने हो भने सस्तो पार्न कसले सक्छ ? तर यसको मतलब यो हैन कि निजी क्षेत्रले जति मन लाग्यो त्यति पैसा बढाउदै जाने कि ? पढ्न मन लागेको बिद्यार्थीलाई पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपरयो । यस कुरालाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्नु आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रले पनि धेरै पैसा खर्च गरेर कलेज अस्पताल खोलेको छ । नेपालगंज मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजहरुले पनि धेरै बिरामीलाई सेवा दिएका छन् । आज निजी अस्पताल नभएका भए, यदि त्यहाँबाट ती अस्पताल हटाइदियो भने सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन । निजी क्षेत्रले त्यसरी दिएको सेवालाई सरकारले धन्यवाद पनि भन्न सक्नुपर्छ । तर निजीले पनि स्वास्थ्य सेवा दिएका छौं भनेर त्यसमा मनपरी गर्न र महंगो शुल्क असुल्न पनि मिल्दैन । यसका लागि कुनै उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
१०. मृर्गौला बचाउँ अभियान कस्तो अभियान हो ? यसको उद्देश्य के हो ? आम नागरिकले कसरी लिने ?
सन् २००६ मा विश्वभरका विशेषज्ञहरुले मृर्गौला उपचारका लागि प्रत्यारोपण, डायलिसिस जस्ता सेवाहरु डाक्टर, नर्सहरुले कहिल्यै पनि सेवा दिएर नसक्ने रहेछ भनेर विकसित देशहरुले भन्ने भनाइ हो । रोगी बढिरहे, अस्पताल उत्तिकै भरिभराव, डाक्टर व्यस्त, पैसा पनि खर्च । हामी अब धान्न सक्दैनौं भन्ने बिकसित मुलुकहरुको मान्यता रहयो । अब के गर्ने त भन्दा मान्छेहरुलाई तिमीसँग २ वटा मृर्गौला छ, ख्याल गर, नबिगार नभनेसम्म भएन भनेर यसमा चेतना बढाउनका लागि हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौं ।
हामीले दुईवटा मृर्गौलाको महत्व धेरै छ । यसलाई बचाउन सजिलो छ है । ख्याल गरे पनि, जीवनशैली राम्रो भएपनि, वर्षको एकपटक चेक गर्नुस है भनेका छौं । मेरो मृर्गौला स्वस्थ्य छ । मेरो नातेदार कसैको दुबै मृर्गौला बिग्रिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । आफुसँग सकुशल दुईवटा मृगौला भयो भने आफ्नो पनि काम चल्ने एउटा झिकेर दिँदा उसको पनि ज्यान बाँच्ने । यो धेरै ठुलो धर्म हो ।
मृर्गौला रोगले त बिगारेपछि मात्र थाहा हुन्छ यसकारण अलिकता रोग लाग्दा त थाहा नै हुँदैन । अस्पताल लास्ट स्टेजमा पुगिन्छ भन्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई यो चेतना जगाउनका लागि विश्वभर २००६ देखि विश्व मृर्गौला दिवस सुरु गरिएको हो ।
२ वटा डायलाइसीस मेसिन वीर अस्पतालमा राखेर ५–६ जनाको डायलाइसीस गरिन्थ्यो भने अहिले देशभर ६ सय मेसिन राखेर ५ हजारको उपचार गर्दै छौं । पहिला हामी व्यस्त थियौं जस्तो लाग्थ्यो अहिलेका साथीहरु पनि उतिकै व्यस्त देखिन्छन् । १९९७ मा मलेसियामा मृर्गौला बिगारेर डायलाइसीस गर्ने व्यक्ति ४ हजार थिए । २०७० मा त्यहाँ ४० हजार पुगे भने हामी पनि त्यहि तालमा छौं ।
हाम्रो झन बिग्रदो जीवनशैली मनपरी किसिमले पेनकिलर र अन्य औषधि सेवनले झन यो समस्यालाई बढवा दिइरहेको छ । ५० हजारलाई डायलाइसीस गर्नुपरे के अर्थतन्त्रले थेग्ला ? त्यसकारण मृर्गौला बचाउन भनेर मृर्गौला बचाउँ अभियान सुरुवात गरेका हौं । हामीले दुईवटा मृर्गौलाको महत्व धेरै छ । यसलाई बचाउन सजिलो छ है । ख्याल गरे पनि, जीवनशैली राम्रो भएपनि, वर्षको एकपटक चेक गर्नुस है भनेका छौं । मेरो मृर्गौला स्वस्थ्य छ । मेरो नातेदार कसैको दुबै मृर्गौला बिग्रिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । आफुसँग सकुशल दुईवटा मृगौला भयो भने आफ्नो पनि काम चल्ने एउटा झिकेर दिँदा उसको पनि ज्यान बाँच्ने । यो धेरै ठुलो धर्म हो ।
योग प्राणयाममा मात्र सीमित नरहेर ध्यान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । ८/१० वर्षकै बालबालिकाले ध्यान सिक्नुपर्ने हुन्छ । ध्यान सिकेर तनाव कम गर्न लड्न सक्नुपर्छ । आज भन्दा १० वर्षपछि १० गुणा बढि तनाव हुन्छ । त्यसलाई झेल्न तयार हुनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफुलाई तनावबाट जोगाउनका लागि योग, प्राणयाम र ध्यान गर्नुपर्छ ।
कुनै कारणबस कसैको बे्रनडेथ भयो भने यसले ८ जना मानिसलाई मुटु, फोक्सो, मृर्गौला, कलेजो दिएर बचाउन सक्छ । त्यसका लागि आजैबाट भन्नु पर्छ । चिकित्सकले तपाइको बिरामीको ब्रेनडेथ भएको छ भनेपछि प्रत्यारोपण गर्नूूपर्छ भनेर सोच बनाउनु पर्छ । यो लक्ष्य राखेर मृगौला बचाउन अभियान सुरु गरिएको हो ।
कुनै पनि अभियान चलाउन केही मात्रामा पैसा आउनु त पर्यो । हरेक नेपालीले दिनको १ रुपैया दियो भनेपनि वर्षको ३६५ रुपैयाँ हुन्छ । मृर्गौला बचाउँ अभियान चलाउन सकियो भने हामीलाई ठाउँ–ठाउँमा गएर शिविर, मृर्गौला जाँच गर्न सजिलो हुन्थ्यो । सरकारले सबैतिर पैसा दिईरहेको छ तर हामीलाई देला भन्ने आशा छैन् । त्यसकारण हामी आफैले एक–एक रुपैया गरेर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । थोपा–थोपा गरेर समुन्द्र बने जस्तै सबै नेपालीले दिए भने हामी सबैको मृर्गौला बचाउन सकिन्छ । हामीले जानकरी दियौं कि हामीसँग मृर्गौला छ, यो जाँच गर्नुपर्छ । यो कुरा जन–जनको कान कानमा पुग्छ ।
१० वर्षमा यदि त्यो मृर्गौला बिग्रिने क्रम २० हजार नपुग्दै आजको अवस्थामा मात्र राख्न सकियो र ५ हजारमा मात्र सीमित राख्न सकियो भने त्यो ठुलो उपलब्धि हो । लक्ष्य चाहि मृर्गौला रोगमुक्त नेपालको परिकल्पना हो ।
११. योग र प्राणयामले मृर्गौलामा के भूमिका खेल्छ ?
योग र प्राणयामले शरीर स्वस्थ्य राख्छ । मृर्गौला मानव शरीर भित्र नै छ । यसले पनि मृर्गौलामा स्वस्थ्य राख्न मद्दत गर्छ । योग प्राणयाममा मात्र सीमित नरहेर ध्यान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । ८/१० वर्षकै बालबालिकाले ध्यान सिक्नुपर्ने हुन्छ । ध्यान सिकेर तनाव कम गर्न लड्न सक्नुपर्छ । आज भन्दा १० वर्षपछि १० गुणा बढि तनाव हुन्छ । त्यसलाई झेल्न तयार हुनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफुलाई तनावबाट जोगाउनका लागि योग, प्राणयाम र ध्यान गर्नुपर्छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि स्वस्थ्य जीवनशैली अपनायो भने रोगले आक्रमण गर्न सक्दैन ।
१२. राष्ट्रिय मृर्गौला उपचार केन्द्रले के काम गर्छ ?
सरकारी अस्पतालमा बसेर डायलाइसीस गर्न सकिँदैन भनेर जुन दिन महशुस भयो त्यो दिन हेल्थ केयर फाउण्डेसन नाम गरेको एनजीओ खोलियो । त्यो एनजीओले राष्ट्रिय मृर्गौला उपचार केन्द्र नामको कार्यालय खोल्यो । त्यसपछि हामीलाई जर्मनीबाट पुरानो मेशिन दानमा उपहार आयो । १० औं वर्ष त्यो पुरानो मेशिनबाट काम गरें ।
सरकारले नियम परिवर्तन गरेपछि नयाँ मेशिन सुचारु गरियो र अहिले नेपालको सबैभन्दा बढि लगभग काठमाडौंको बनस्थली, धापाखेल, सुमेरु अस्पताल, तनहँु जिल्ला अस्पताल, चितवनमा बकुलर अस्पताल, गोल्छा आँखा अस्पताल विराटनगर, तामाकोशी अस्पताल मन्थली र गौशालामा पनि योजना बनाइएको छ । लुम्बिनीमा चुजी फाउन्डेसनसँग मिलेर खोल्ने पनि योजना बनाइएको छ । मृर्गौला बिग्रिएका व्यक्तिको डायलाइसीस गर्ने उदेश्यले खोलिएको राष्ट्रिय मृर्गौला उपचार केन्द्र हो ।
भरतपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक आकस्मिक कक्ष बनाइने २ दिन पहिले
तपाई मुख स्वास्थ्यबारे कत्तिको सजक हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है ! २ दिन पहिले
औषधि प्रयोग गरी सुनका गहना लुटपाट, चोरी गर्ने दुई युवा पक्राउ ३ दिन पहिले
आयुर्वेदिक उपचार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ६ दिन पहिले
राजविराजमा एचआइभी एड्सबाट किशोरीको मृत्यु २० घण्टा पहिले
बालविवाह रोक्न धामीझाँक्रीलाई प्रशिक्षण १७ घण्टा पहिले
नेप्सेको साइडमा समस्या ? १४ घण्टा पहिले
सिभिल लघुवित्तको शेयर कारोबार फुकुवा १३ घण्टा पहिले
माघ १ गते देशैभर सार्वजनिक बिदा ६ दिन पहिले
चीनको एक सुनखानीमा विष्फोट हुँदा २२ मजदुर थुनिए ! ७ दिन पहिले
आखेटोपहार र भरुवा बन्दुकसहित पाँच जना पक्राउ ३ दिन पहिले
थारू समुदायमा माघीको चहलपहल ६ दिन पहिले
लाठी प्रहार गरी आफ्नै भाइको हत्या, दाजु पक्राउ ७ दिन पहिले
सूर्या लाइफको लाभांश आज पारित हुँदै १८ घण्टा पहिले
छिनमै देखिने, छिनमै हराउने टावरले डोल्पाली हैरान ! ३ हप्ता पहिले
भोलिदेखि कुवेतमा पनि कोरोनाविरुद्धको खोप दिइने ४ हप्ता पहिले
देशभरको मौसम बदली, उच्च पहाडी जिल्लामा हिमपात जारी २ हप्ता पहिले
काठमाडौंमा मोटी युवतीहरुको मोडलिङ अडिसन ६ दिन पहिले
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बालकुमारीमा सुरू ४ हप्ता पहिले
कच्चा पदार्थमा विदेशको भरपर्दा कुखुराजन्य उत्पादनको लागत मूल्य बढी १ हप्ता पहिले
सिटिजन्स बैंक र तिनाउ मिसन बीच अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर २ हप्ता पहिले
लाइसेन्स प्रक्रियालाई थप पारदर्शी गर्न ध्यानाकर्षण १ हप्ता पहिले
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक मारिएको पेन्टागनको पुष्टि १ वर्ष पहिले
आज पदक जित्ने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई नागरिक अभिनन्दन १ वर्ष पहिले
स्ट्यान्डिङ क्रिकेट टोली शनिबार भारतको आग्रा जाने २ वर्ष पहिले
चलचित्र एल हाउसको छायाँकन अन्तिम चरणमा ६ महिना पहिले